Toerana 12 tokony hialana amin'ny taona 2018 hoy ny CNN | Vaovao momba ny dia
Toerana 12 tokony hialana amin'ny taona 2018 hoy ny CNN
Maria | | About us, Tsangatsangana
Vao tsy ela akory izay ny CNN dia namoaka ny lisitr'ireo toerana 12 tokony halaviran'ny mpizahatany mandritra ny fialan-tsasatra ataony amin'ny taona 2018. Na eo aza ny angon-drakitra tsara nosoratan'i Barcelona tamin'ny taona 2016 ho tanàna fizahan-tany noho ireo mpitsidika 34 tapitrisa nananany tamin'io taona io, dia nahagaga fa hita ao amin'ny lisitra miaraka amin'ireo tranonkala hafa toa ny Taj Mahal, ny Nosy Galapagos na Venice. Inona no nahatonga ny CNN tsy hanome soso-kevitra ny hitsidika ireo toerana ireo?
5 Nosy Galapagos
Ny vavahadin-tserasera amerikana dia nanamafy fa ny hamaroan'ny olona no tena antony tsy fitsidihany an'i Barcelona amin'ny taona 2018, satria misy fiatraikany manimba ny tanàna sy ny mponina ao aminy.
Nasongadin'izy ireo ihany koa ny phobia mpizahatany izay navotsotra tany Barcelona teo amin'ireo olom-pirenena sasany izay mampiseho ny tsy fahafaham-pony amin'ny fizahan-tany marobe amin'ny alàlan'ny graffiti sy fihetsiketsehana. Raha ny marina, nampitandrina izy ireo fa nankany amin'ny moron-dranomasin'i Barceloneta ny mpanohitra tamin'ny volana Aogositra lasa teo mba hanamelohana ny fihetsika tsy mendrika nataon'ny mpizahatany.
Torak'izany ihany koa, ny CNN dia nanipika ny fomba nitomboan'ny hetsi-panoherana tao Barcelona noho ny fiakaran'ny vidin'ny trano fanofana trano noho ny serivisy toa ny Airbnb, izay tena manahirana ny sasany mahita toerana honenana ary ny sasany manery azy ireo hiala ny tranony noho ny amin'ny ny vidiny lafo be. Notanisain'izy ireo ihany koa ny fiezahan'ny Filankevitry ny tanàna hamaha ny olana tamin'ny alàlan'ny fandaniana lalàna mametra ny isan'ireo fandriana mpizahatany.
Ho safidy iray hafa amin'ny fahamaroan'ny olona ao Barcelona izy ireo, manolo-kevitra ny hitsidika an'i Valencia izy ireo amin'ny taona 2018 satria tanàna izay tolotra gastronomika sy kolontsaina no afaka mifaninana amin'ny renivohitra Catalan nefa manana fialantsasatra "tsy dia mikorontana".
Ny fihoaram-pefy koa no antony nampidiran'ny CNN an'i Venise ao amin'ity lisitra ity. Olona 40 tapitrisa eo isan-taona no mitsidika ny tanàna. Mikoriana mafy izay atahoran'ny Venetianina maro fa hisy vokany ratsy amin'ny tsangambaton'ny tanàna toy ny, ohatra, ny kianjan'i St. Marka.
Raha ny marina, volana maro lasa izay, ny governemanta eo an-toerana dia nanapa-kevitra ny handray fepetra hifehezana ny fidirana amin'ity kianja mahafinaritra ity amin'ny taona 2018 amin'ny alàlan'ny fampiasana jiro fifamoivoizana izay mifehy ny fidirana amin'ilay toerana ary amin'ny fametrahana ora fitsidihana izay ilana hamandrihana. miaraka mialoha.
Ity lalàna vaovao ity dia hameno ny hetra fizahan-tany ampiharina hitsidika an'i Venise ary miovaova arakaraka ny vanim-potoana, ny faritra misy ny hotely sy ny sokajy misy azy. Ohatra, ao amin'ny nosy Venice, 1 euro isaky ny kintana isaky ny alina dia ampangaina amin'ny fotoam-pahavaratra.
Ny volavolan'ireo fitsipika vaovao dia taorian'ny nanenoan'ny Unesco ny fanairana momba ny fahasimban'ny Venice, izay nitana ny lohatenin'ny World Heritage Site hatramin'ny 1987.
Vokatry ny firoboroboan'ny mpitsidika niaina ny tanàna Kroaty noho ny andiany 'Game of Thrones', dia tsy maintsy nametraka quota fitsidihana isan'andro ny manampahefana mba hampihenana ny be loatra satria, tamin'ny volana Aogositra 2016, nahazo mpizahatany 10.388 i Dubrovnik tao anatin'ny iray monja andro, izay nisy fiatraikany ratsy tamin'ny mponina izay mipetraka amin'ny faritra be rindrina malaza sy ireo tsangambato. Raha ny marina dia noferan'ilay tanàna ny isan'ny olona afaka nanangana ny rindrin'ny taonjato faha-4.000 isan'andro ka hatramin'ny XNUMX.
Averina indray fa ny habetsahan'ny vahoaka no antony tsy tokony anoloran'ny CNN ny hitsidika an'i Dubrovnik amin'ny taona 2018. Manolo-tena an'i Cavtat kosa izy, tanàna mahafinaritra eo amin'ny morontsirak'i Adriatika izay manana morontsiraka lehibe handosirana ny vahoaka.
Tamin'ny fitsidihana 1,4 tapitrisa nandritra ny taona 2016 sy olona 5.000 XNUMX isan'andro isan'andro, saika ho faty tamin'ny fahombiazana i Machu Picchu, zavatra iray navoakan'ny CNN. Raha raisina ireo angon-drakitra ireo, dia natolotry ny Unesco tao anaty lisitry ny Toerana Arkeolojika ny tranobe taloha noho ny fahamaroan'ny mpizahatany ary, mba hisorohana ny faharatsiana bebe kokoa, ny governemanta Peroviana dia tsy maintsy nandray fepetra hiarovana azy io.
Ny sasany amin'izy ireo dia tokony hametraka fiovana roa isan'andro hidirana ao amin'ny Machu Picchu ary hanao izany miaraka amin'ny torolàlana misy vondrona olona dimy ambin'ny folo manaraka ilay zotra voamarika. Ho fanampin'izay, afaka mijanona ao amin'ny trano mimanda mandritra ny fotoana voafetra fotsiny ianao amin'ny fividianana tapakila. Fiovana mahatalanjona raha jerena fa mandraka ankehitriny dia misy olona afaka mandehandeha an-kalalahana amin'ireo rava sy mijanona raha mbola tadiaviny.
Toy ny nanjo an'i Machu Picchu, ny Nosy Galapagos dia tafiditra tao anatin'ny lisitry ny Heritage in Danger ihany koa noho ny hamaroan'ny olona sy ny tsy fisian'ny fepetra mivaingana hifehezana azy mandritra ny fotoana fohy.
Mba hitehirizana ny iray amin'ireo toeram-ponenana voajanahary tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao, ny governemanta Ekoatoriana dia nanaiky andiana fameperana toy ny: fanomezana tapakila fiaramanidina miverina, fananana famandrihana hotely na taratasy fanasana avy amin'ny mponina eo an-toerana ary koa ny fifehezana ny fifamoivoizana amin'ny karatra .
Ny Nosy Galapagos dia toerana iray hafa izay tsy nanoro hevitra ny CNN ny amin'ny taona 2018 fa kosa manolotra ny Nosy Ballestas any Peru, amorontsirak'i Pasifika, izay ahafahanao mankafy ny tontolo tsara tarehy sy ny biby tompon-tany.
Antarctica, Cinque Terre (Italia), Everest (Nepal), the Taj Mahal (India), Bhutan, Santorini (Greece) or the Island of Skye (Scotland), Mameno ny lisitra natolotry ny CNN izy ireo, ary koa mihevitra ny tontolo iainana na ny antony marobe.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » Toerana 12 tokony hialana amin'ny taona 2018 hoy ny CNN
CR7 dia hisokatra hotely vaovao any Marrakech, Madrid ary New York
Inona no jerena ao an-tanànan'i Oxford